Maxaa dhacaya haddii aan addeeco dhammaan amarrada? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Hambalyo! Waxaad noqon kartaa mid kalsooni badan oo aamin ku ah Maalinta Qiyaamaha, sababtoo haddii aad dhawrtid dhamaan Sharciyadda oo dhan wakthti kasta waxaad qabtaa Xaqnimo taam ah. Shaqsi ahaan, annigu ma garanayo cidna kaasoo awoodi kara in uu dhawro sharciga sidan oo kale sidaa daraaddeed tani dhab ahaantii arrintani waa mid guul weyn leh. Laakiin ha joojin dadaalkaaga weli sababtoo ah waa in aad ku sii socotaa jidkan toosan noloshaada oo dhan. Waxaa horay u sheegay in Tobanka Ammar ee Sharciga aan weligood la masixin maadaama ay la xaajoodaan arrimaha aasaasiga ah ee caabudidda Ilaaha kaliya, sinadda, xadidda, runta, iwm. Laakiin nebiyaddii dambe ayaa wax ka yiraahdeen ammarradaas inay si buuxda u sharaxaan dhaqan gelintooda. Hoos waxaa ku qoran waxa Ciise Masiix (NNKH) uu ka yidhi Injiilka sida aan u sii xafidnaa Tobankan ammar. Markuu wax barayay wuxuu ula jeeday in ay ‘Farrisiintii’. Kuwaasu waxay ahaayeen macallimiin diimeed wakhtigiisii. Waxaa loo tixgelin karaa sida culimada aadka diinta u tagaan iyo aqoonyahanno aqoon u leh cilmiga maanta.
Erayadii Ciise Masiix (NNKH) ee Tobanka Ammar
27 Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaanad sinaysan. 28 Laakiin waxaan idinku leeyahay, Nin walba oo qof dumar ah damac u eegaa, durba qalbigiisuu kaga sinaystay. 29 Haddii ishaada midig ku xumayso, iska bixi oo iska tuur, waayo, waxaa kuu wanaagsan in xubnahaaga mid kaa lunto intii jidhkaaga oo dhan jahannamada lagu tuuri lahaa. 30 Gacantaada midig hadday ku xumayso, iska jar oo iska tuur, waayo, waxaa kuu wanaagsan in xubnahaaga mid kaa lunto intii jidhkaaga oo dhan jahannamada geli lahaa.
(Matayos 5:20- 30.)
Intaa waxaa dheer, rasuulladii Ciise Masiix – asxaabbadiis – Sidoo kale wuxuu baray waxa ku saabsan sanam caabudidda. Waxay bareen in sanam caabididdu aysan ahayn oo kaliya inaan caabudo Sanamyada dhagaxa ah – laakiin caabudidda wax kasta oo ay wehliyaan Ilaah. Markaasaa waxaa taas ka mid ah lacagta. Sidaa darteed waxaad arki doontaa in ay baraan in ‘damac’ uu sidoo kale yahay sanam caabudid sababtoo ah qofka damaaciga ah wuxuu caabudaa lacagta oo uu ku lamaanaa Ilaah .
5 Haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal, kuwaas oo ah sino, iyo wasakhnimo, iyo kacsi xaaraan ah, iyo damac shar ah, iyo hunguri xumaan, taas oo ah sanam caabudid, 6 waxyaalahaas oo daraaddood ay cadhada Ilaah ugu soo degto carruurta caasinimada.
(Kolosay 3: 5-6)
4 iyo ceeb, iyo hadal nacasnimo ah, iyo kaftan bilaash ah, oo aan idinku habboonayn, laakiinse waxaa idinku wacan mahadnaqid. 5 Waayo, taas waad taqaaniin in dhillay, ama qof wasakh ah, ama nin damac xun oo sanam caabudaa, uusan innaba dhaxal ku lahayn boqortooyada Masiix iyo Ilaah. 6 Ninnaba yuusan idinku khiyaanayn hadal aan micne lahayn; waayo, waxyaalahaas daraaddood ayaa cadhada Ilaah ugu soo degtaa carruurta caasinimada.
Sharaxaadan waxay qaadanayaan asalka Tobanka Ammar, taasoo inta badan la xaajoota falal ka baxsan, in waxa riixaya gudaha, taasoo Ilaah kaliya uu arki karo. Tani waxay ka dhigaysaa Sharciga xitaa mid aad u adag.
Waxaad dib u eegi kartaa jawaabtaada sida in aad xajin karaysid Sharciga Ilaah. Laakiin haddii aad hubto in aad xajin karaysid Sharciga oo dhan Injiilku kuuma yeelan doono wax macnaha ama ula jeedo toona adiga. Markaas ma uu jiro baahi in ay sii wadaan soo socda Calaamadaha dheeraadka ah ama isku dayaya in ay fahmaan Injiilka. Tani waa maxaa yeelay injiilka waa uun keliya kuwa ku dhacaya in ay xajistaan sharciga – Ma’ahan kuwa xajista. Ciise Masiix waxa uu u sharaxay sidan soo socota.